UPDATE: Mitohy ny tantaran'ny United Airlines momba ny nofy ratsy COVID-19
Home » Lahatsoratra farany farany » Aviation » UPDATE: Mitohy ny tantaran'ny United Airlines momba ny nofy ratsy COVID-19
Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao • People • fanorenana • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Mpandeha 50 izay nanidina tamin'ny sidina United Airlines 3742 avy any Chicago mankany Milwaukee, tantanan'ny Air Wisconsin, ny alatsinainy teo no ho diso fanantenana raha nanao fifanarahana COVID-19. Ity sidina ity dia tsy tokony navela handeha mihitsy, ary izany dia nohamafisin'ny mpanamory fiaramanidina sy ny kapiteny ho tsy azo antoka.
Nanatratra ny FAA eTurboNews ary nanaiky ny olana.
Nilaza ny FAA eTurboNews samy tapaka daholo ny Air Conditioning Systems ary tena tsy dia mahazatra loatra ny fiaramanidina miaraka amin'ny mpandeha fa tsy ara-dalàna
FAAtold eTurboNews fa mety ho voamariky ny loopole noho io tantara io. Ny mety amin'ny ora tsy areti-mandoza dia mety tsy ho voaro mandritra ny areti-mandringana. Hisy fanavaozana hafa ho avy
Ny sidina United Airlines commuter izay namonoana ny filtration an'habakabaka noho ny tsy fetezan'asa dia navela hisidina.
Ity olana ity dia efa fantatra alohan'ny fiainganana ary tsy noraharahaina.
United Airlines UA 3742 avy any Chicago mankany Milwaukee amin'ny 4 Oktobra.
Scott Kirby, Ny CEO an'ny United Airlines, dia nilaza tamin'ny Jolay 2020: "Fantatray fa azo antoka ny tontolo iainana amin'ny fiaramanidina, satria ny fikorianan-drivotra dia natao hanakanana ny fifindran'ny aretina, noho izany dia vao mainka manatsara ny fikorianan'ny rivotra ny rafitra sivana HEPA, dia tsara kokoa ho an'ny ekipazy sy ny mpanjifantsika izany. Ny kalitaon'ny rivotra, ampiarahina amin'ny politikam-panafody henjana ary ny toerana tsy misy otrikaretina matetika, no sakana hanakanana ny fiparitahan'ny COVID-19 amin'ny fiaramanidina. ”
Manelingelina ny mahita fa ilay kaompaniam-pitaterana an'habakabaka io ihany no tsy niraharaha izay noderain'ny CEO fa izy irery ihany no fomba fampandehanana ny seranam-piaramanidina mandritra ny areti-mandringana.
Ny fikolokoloana ny United Airlines any Chicago dia namporisika ny kapiteny nanidina UA 3742 hiala amin'ny fahafantarana fa tsy azo ampiasaina amin'ity rafitra fohy mankany Milwaukee ity ny rafitra sivana rivotra. Ny fialantsiny: any Milwaukee ny fikojakojana ny Air Wisconsin - aza hadino ny mpandeha.
UA 3742 dia niasa tamin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka Air Wisconsin, Air Wisconsin, nampiasana CL 65, izay toa fiaramanidina CRJ 200. Ny Canadair CL 65 dia fiaramanidina misy seza 50 izay natsangan'i Quebec, Bombardier monina any Canada, teo anelanelan'ny 1992 ka hatramin'ny 2006.
Rehefa eTurboNews antsoina hoe fanohanana ara-teknika Bombardier, nolazaina tamin'ity fanontana ity fa antitra loatra ilay fiaramanidina ka tsy afaka manana fanohanana an-tserasera amin'izao fotoana izao.
Misaotra Ny sivana hopitaly avo lenta amin'ny hopitaly (HEPA), ny ankamaroan'ny ampahany (ao anatin'izany ny mikraoba sy ny vongan-tsofina momba ny taovam-pisefoana viraliny) dia esorina amin'ny rivotra kabinin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka amin'ny fotoana maharitra satria mandeha am-bisikileta izy io ary soloina rivotra madio. Izany dia miseho amin'ny fiaramanidina rehetra lehibe kokoa noho ny ankamaroan'ny fiaramanidina isam-paritra misy seza 50 na dia misy aza ny seranam-piaramanidina sasany dia mampiasa vola amin'ny haitao filtration HEPA amin'ireo fiaramanidina ireo ihany koa.
Inona no mazava, raha tsy misy fivezivezivezy amin'ny sidina mpandeha mihitsy, dia hampidi-doza ny mpandeha sy ny mpiasa ao aminy toy ny COVID-19. eTurboNews dia nanatona an'i Lee mpisolovava fiaramanidina any New York, ary VJ P, VP taloha an'ny Etihad Airways hanamafy izany.
Soso-kevitra ny hijanona amin'ny 6 metatra miala ny mpandeha manaraka, izay mazava ho azy fa tsy ho vita amin'ny fiaramanidina ara-barotra, indrindra amin'ny fiaramanidina mpitatitra entana, toa ny UA 3742 amin'ny 4 Oktobra.
Raha tsy misy ny elanelana ara-tsosialy dia mety ny filtration rivotra araka ny tokony ho izy ihany no hijoro eo anelanelan'ny mpandeha sy ny viriosy.
Tao amin'ny UA 3742 niasa avy tany Chicago O'Hare ka hatrany Milwaukee ny 4 Oktobra, nanambara ny mpiasan'ny United Airlines tany amin'ny faritra fitaterana fa mety ho mafana kely ao anaty fiaramanidina izy ireo satria tsy niova ny mari-pana. Tsy nisy nazavaina taminy fa nivoaka ny rafi-pitobiana, ary hametraka ny mpandeha sy ny ekipa mora tratran'ny virus coronavirus na aretina hafa azo avy amin'ny rivotra.
Ny UA 3742 dia nampiditra taxi tamin'ny làlambe tany Chicago, ary efa tena mafana ny maripana ao anatiny, ka nanomboka nitembesatra ny ankamaroan'ny mpandeha, ary ny sasany kosa nanomboka nikohaka.
Tsy tonga velively ny rafitry ny rivotra, fa ny mampihomehy dia naneho tamim-pireharehana ilay mpanamory fiaramanidina ny fitondrana vaovao fanadiovana United Airlines.
Rehefa nanontaniana manokana ny mpikarakara ny sidina dia nilaza izany eTurboNews Matahotra izy ny ho ao anatin'io sidina io ary nampanantenaina tamin'ny sidina teo aloha fa ny rafitra rivotra no hatao ao Chicago. Nilaza izy fa nanaiky tamim-pandrenesana ny hanohy any Milwaukee, izay tranony ihany koa, ary nilaza fa tsy hiverina hiasa amin'ny fiaramanidina intsony izy.
eTurboNews hatrany hatrany dia nanantona ny United Airlines sy Air Wisconsin hahazoana fanazavana momba ny fampiasana sivana toy izany tamin'ity sidina ity. Tsy nisy valiny avy tamin'izy ireo koa.
Toa tany Chicago, foibe UA, ny fikolokoloana ny United Airlines dia tsy te-hiatrika izany olana izany ary nanolo-kevitra ny hisidinan'ny sidina mankany Milwaukee, ka azo amboarina ao Milwaukee, tobin'ny Air Wisconsin ny fiaramanidina.
eTurboNews niresaka tamin'ny mpanamory fiaramanidina rehefa avy niantsona ary nanontany raha azo antoka ny miasa sidina feno miaraka amin'ny rafi-drivotra malemy mandritra ny areti-mandringana. Nanaiky ilay mpanamory eTurboNews tsy izany, ary nifona izy.
Ny mpandeha iray hafa dia nilaza fa kapiteny efa misotro ronono izy ary sosotra noho ny kapitenin'ny Air Wisconsin nitantana ity fiaramanidina ity.
eTurboNews dia naninjitra ny United Airlines imbetsaka mba hahitana raha azo zahana ireo mpandeha amin'ity sidina ity, saingy mbola tsy nisy valiny.
eTurboNews dia nanatona ny United Airlines nangataka fanazavana. Nilaza ny fifandraisana amin'ny haino aman-jery eTurboNews, tsy nisy fisehoan-javatra voasoratra ho an'ity sidina ity.
Nilaza ny serivisy ho an'ny mpanjifa UA fa tsy raharaha lehibe izany satria sidina fohy fotsiny izy io, saingy hanome vola 5,000 kilometatra matetika izy ireo noho ilay "fanelingelenana."
Lehilahy iray antsoina hoe "Chris" no niresaka eTurboNews mpanonta Juergen Steinmetz. Nilaza izy fa izy no VP an'ny Corporate Security ho an'ny Air Wisconsin. Nanaiky ny zava-nitranga izy ary nifona. Nampanantena izy fa hiverina any amin'ny eTN miaraka amin'ny antsipiriany bebe kokoa. Tsy nisy izany, fa nandefa mailaka tsy misy anarana na sonia ny Air Wisconsin.
Mikasika ny zavatra niainanao vao haingana tamin'ny sidina 3742 miaraka amin'ny serivisy avy any Chicago mankany Milwaukee. Ny fiarovana no laharam-pahamehantsika voalohany amin'ny Air Wisconsin.
Ny fiaramanidina dia nihaona tamin'ny mari-pahaizana momba ny fahamendrehana FAA ary ny ekipanay, nifanakalo hevitra tamin'ny manam-pahaizana momba ny fikojakojana, dia nanome toky fa azo antoka ny sidina. Miala tsiny izahay noho ny fanelingelenana niainanao tamin'ny sidinao ary misaotra anao izahay nanolotra an'io raharaha io ho anay.
Juergen Steinmetz hoy:
Oktobra 10, 2021 ao amin'ny 03: 27
Ry L.Lazuli malala
Mba hanazavana fotsiny ny hevitrao.
Ny serivisy ho an'ny mpanjifa United Airlines 1K dia nilaza tamiko tamin'ny antso fanindroany fa nanonitra ahy 5K kilaometatra izy ireo. Namaly aho fa tsy nahazo onitra fa nisy fanazavana ary te hahita azy fa manara-dia ireo mpandeha ao anatiny i UA.
Nilaza ity Ramatoa avy amin'ny mpanjifa 1 K ity tamin'ity antso an-tsoratra ity fa sidina fohy fotsiny ity ary tsy azo omena alalana intsony ny olako.
Nangataka valiny tamin'ny olona teo amin'ny haino aman-jery aho. Taorian'ny mailaka fanarahana 5 dia ny hany navalina dia ilay navoaka sy avy any amin'ny air Wisconsin.
Niresaka tamin'i Chris VP fiarovana aho
Air Wisconsin izay nahalala ny olana ary nampanantena ny hiverina amiko - tsy nanao izany mihitsy izy.
L. Lazuli hoy:
Oktobra 10, 2021 ao amin'ny 01: 49
Be dia be eto hiantso ny BS. A. Tsy fiaramanidina na ekipa United, fa kaompaniam-pitaterana an'habakabaka. B. Raha nampitandrina ny Kapiteny ny fikarakarana dia maninona no tsy misy tatitra an-tsoratra momba ny rafitra tapaka? C. Tena miahiahy aho na iza na iza ao amin'ny United management dia mety hiteny amin'ny mpanao gazety milaza fa "tsy raharaha lehibe" izany satria sidina fohy io. Misy lafiny roa isaky ny tantara ary ity iray ity dia feno lavaka.